Fifanarahan-Jono Iraisampirenena Eo Amin’i Maraoka sy ny Vondrona Eoropeana Tsy Miraharaha ny Fibodoana an’ i Sahara Andrefana · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Ivar Fersters Nandika (fr) i Abdoulaye Bah, Zo Razafy, Andriamifidisoa Zo
Voadika ny 28 Marsa 2018 4:34 GMT
Tsingerintaona fahatsiarovana ny faha 42 taona nanambaràna ny fahaleovatenan'i Sahara Andrefana tamin'i Espaina ny 27 Febroary. Na dia izany aza, tsy misy fahaleovantena ankalazaina ho an'ny ankamaroan'ny zaratany izay mitoetra ao anatin'ny fibodoana maraokana, mety ho tsapa ao amin'ny tobin'ny mpialokaloka Sahrawi ao Alzeria ny fandresena kely, izay onenan’ ny ankamaroan'ny mponina.
Tamin'io andro io,nisy fanapahan-kevitry ny Fitsarana Eoropeanina (CJEU) navoaka ho amin'ny fialana amin'ny fanjanahantany. Ny marina kokoa, ny fanapahan-kevitra dia miompana amin'ny fifanarahana nifanaovan'ny Vondrona Eoropeana sy ny Fanjakan'i Maraoka amin'ny fidiran'ny indostrian'ny fanjonoana eoropeana amin'ny fari-dranomasina maraokana.
Napetraka nanomboka tamin'ny taona 2006 ary tapitra amin'ny volana Joly 2018 io lazaina fa fifanaraham-piaraha-miasa amin'ny sehatry ny jono io, saingy efa misy ny dinika fanavaozana izany. Manazava ny fanapahan-kevitry ny CJEU fa ny karazana fifanarahana tahaka io amin'i Maraoka dia tsy afaka mampiditra azy ireo any amin'ny fari-dranon'i Sahara Andrefana, izay lazain'i Maraoka fa eo ambany fiandrianam-pireneny.
Efa voaomana mialoha, voarindra hifanaraka amin'ny fanapahan-kevitra teo aloha ny fanambaràna ary tsy iadiankevitra loatra amin'ny fomba fijerin'ny lalàna iraisampirenena. Na izany aza, ny fivoaran-draharaha farany eo amin'ny fifandonana eo amin'ny sampana samihafa ao amin'ny fitantanana ny Vondrona Eoropeana (EU) mikasika ny fifanaraham-barotry ny vondrona amin'i Maraoka ihany io. Mazava ho azy ny adihevitra fa ny fibodoan'i Maraoka an'i Sahara Andrefana, izay heverin'ny Firenena Mikambana fa “zaratany tsy mizaka tena“
Misy fifampiraharahana roa miavaka tsara amin'izao fotoana izao eo amin'ny Vaomiera Eoropeana sy i Maraoka amin'ny lohataona 2018: fifanarahana fiaraha-miasa ao amin'ny sehatry ny jono izay manome alàlana ny sambo eoropeana hanjono ao amin'ny fari-dranomasina maraokana, sy fifanarahana ara-barotra mikasika ny vokatra ara-pambolena sy ny jono [fr]. Tapitra amin'ny Jolay ny fifanarahana amin'ny jono ary amin'ny Aprily ny fifanarahana ara-barotra.
Na dia nofoanan'ny CJEU tanteraka aza izay rehetra fifanarahana ifanaovana amin'i Maraoka tamin'ny taona 2016 amin'ny faritra bodoina, dia toa nisisika hanavao ny fifanarahana amin'i Maraoka ny vaomiera ara-barotry ny Vondrona Eoropeana ny volana Janoary 2018. Zava-tsy nampoizina nitarika fanamelohana avy amin'ny governemanta an-tsesitany any Sahara Andrefana, ireo vondrona mpitolona mitam-piadiana, ary ny Parlemanta Eoropeana.
Iray amin'ireo mpanao sonia i Jytte Guteland, mpikambana ao amin'ny vondrona parlemantera “sosialy demaokraty” izay anatin'ny lisitra vondrona parlemantera eoropeana lazain'ny manam-pahefana maraokana ho persona non grata (olona tsy mahazo miditra ao aminy) rehefa niezaka ny hiditra tao Sahara Andrefana.
Tao anatin'ny taratasy fanoherana misokatra, nanambara ny fikambanana firaisamonim-pirenena Saharawi miisa 89 hoe:
Amin'ny maha faritany tsy mizakatena azy, takian'ny lalàna iraisam-pirenena ny hihainoana ny hevitry ny vahoaka ao Sahara Andrefana amin'ny hetsika ara-toe-karena rehetra atao ao amin'ny faritra ary tokony ahazoany tombony izany. Mba hanasarotana bebe kokoa ny fanontaniana, efa ny voanjo maraokana no maro an'isa ankehitriny any amin'ny faritra voabodo, fa efa lasa sesintany (ivelan'i) Sahara Andrefana, ka monina any amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana ao Alzeria mpifanolo-bodirindrina ny maro an'isa amin'ny vahoaka Saharawi. Any amin'ireny toby ireny no iasan'ny Front Polisario [fr], izay ankatoavina eo amin'ny sehatra iraisampirenena.
Tao anatin'ny fanamelohana tahaka izany dia nolavin'ny tambajotram-panarahamaso iraisampirenena Western Sahara Resource Watch (WSRW) fangatahana fanadihadiana nataon'ny vaomiera.
Amin'ny maha-mpiara-miombon'antoka ara-barotra voalohany azy, miankina betsaka amin'ny Vondrona Eoropeana (EU) ny toekarena maraokana eo amin'ny sehatry ny fanondranam-bokatra. Mandritra izany fotoana izany, maro ireo firenena eoropeana mpikambana no miatrika teritery anatiny sy tsindry matanjaka avy amin'ny indostrian'ny jono ao aminy mba ahafahan'izy ireo miditra ao amin'ny loharanon-karenan'i Sahara Andrefana
Miharìtra haingana dia haingana ny tahirin-trondro sy ireo hazan-dranomasina eran'izao tontolo izao, tokony hitombo ny maha-zava-dehibe ny fari-dranomasin'i Sahara Andrefana ao amin'ny Oseana Atlantika. Ankehitriny, heverina ho faran'izay manan-karena indrindra ato amin'ny kaontinanta Afrikana io fari-dranomasina io, ary noho ny fibodoana, mitàna ny laharana voalohany amin'ny firenena mpanondrana trondro sy hazan-danomasina eto amin'ny kaontinanta i Maraoka. Tondroin'ny tarehimarika ofisialy fa manodidina ny 70%-n'ny haza maraokana manontolo no mivoaka any amin'ireo seranan-tsambon'i Sahara Andrefana raha mivoaka avy ao Tan-Tan [fr] sy Agadir [fr] manakaiky ny faritra bodoina ny antsasaky ny haza sisa. Tombanana fa maherin'ny 90%-n'ny trondro azon'ireo sambo vahiny ireo no azony avy ao amin'ny fari-dranomasin'i Sahara Andrefana.